500,000 Shaqooyinka Hoteelka Mareykanka Ma Soo Noqon Doonaan Dhamaadka Sanadka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hotelada & Dalxiiska Wararka » 500,000 Shaqooyinka Hoteelka Mareykanka Ma Soo Noqon Doonaan Dhamaadka Sanadka
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Dakhliga hoteelka ayaa hoos u dhigi doona $ 44 bilyan sannadkan marka loo eego 2019.
In ka badan shantii mid ka mid ah shantii hawlgal ee hoteellada tooska ah ayaa shaqooyin lumay intii lagu jiray aafada.
Degitaanka hoteelka ayaa la saadaalinayaa inuu hoos u dhigi doono boqolkiiba toban dhibcaha heerarka 2019.
Gobollada iyo deegaannada waxay lumi doonaan in ka badan $ 20 bilyan oo canshuuro aan la ogeyn ah oo laga helo hoteelada labadii sano ee la soo dhaafay.
Bartamihii illaa 2021, warbixin cusub iyo burburin shaqo-goboleed-goboleed oo ay soo saartay Ururka Hoteelka & Hoyga Mareykanka (AHLA) ogaato in safarka firaaqada uu bilaabayo inuu soo laabto, wadada warshadaha hoteelka ee ka soo kabashada aafada ayaa ah mid dheer oo aan sinnayn, iyadoo suuqyada magaalooyinku si aan sax ahayn u saameeyeen.
Saadaasha warshadaha ayaa soo hagaagtay tan iyo bishii Janaayo iyadoo kor u kac ku yimid safarka firaaqada, laakiin warshadaha ayaa wali ka hooseeya heerarka safka hore.
In kabadan mid ka mid ah shantii hawlgal toos ah ee hudheellada shaqooyinka lumay intii lagu jiray aafada - kudhowaad 500,000 guud ahaan-ma soo noqon doonaan dhammaadka sanadka.
Natiijooyinka ayaa imanaya iyadoo AHLA iyo Ururka Aasiya Ameerika ee Milkiilayaasha Hoteellada ay martigelinayaan Shirweynahooda Waxqabadka Virtual (July 20-22), halkaas oo milkiileyaasha hudheelada ee ka socda ku dhowaad gobol kasta oo dalka ka mid ah loo qorsheeyay inay la kulmaan xubnaha Koongareeska si ay ula wadaagaan sida ay COVID-19 u saameysay warshadaha oo ku baaq gargaar dheeraad ah adoo ku boorinaya Congress-ka:
Konsonsor oo gudbi Sharciga Shaqooyinka ee Badbaadinta Hoteelka (S.1519 / HR3093)
Konsonsor iyo biilasha gudbinta si loo sameeyo cadaalad heerkiiba (HR2104 / S.2160)
Ka caawi sidii loo siin lahaa mulkiileyaasha helitaanka Deynta Canshuurta Shaqaaleynta, oo hadda ka reebtay milkiileyaal badan
In kasta oo safarka firaaqada kor loo qaaday, badhtamihii 2021 weli waxaannu aragnaa in waddada dib u soo kabashada buuxda ee hudheelada Ameerika ay dheer tahay oo aan sinnayn. Natiijooyinkaani waxay muujinayaan burburka dhaqaale ee wali wajahaya suuqyada hoteellada waxayna hoosta ka xarriiqayaan baahida loo qabo gargaar lala beegsanayo Congress-ka shaqaalaha hudheelka iyo ganacsiyada yaryar, ”ayuu yiri Chip Rogers, madaxweynaha iyo agaasimaha guud ee AHLA. Huteelada iyo shaqaalahoodu waxay muujiyeen adkeysi aan caadi ahayn oo ay kala kulmeen caqabado dhaqaale oo aan hore loo arag, laakiin hadday tahay Xeerka Shaqooyinka ee Badbaadinta Hoteellada, qiimayaasha cadaalad kasta, ama ballaadhinta aaladda ku saabsan Daynta Canshuurta Shaqaalaha, waxaan u baahanahay caawinta Koongareeska soo kabasho buuxda. Taasi waa sababta ay warshaduhu ugu midoobeen Shirkeenna Waxqabadka Waxqabadka. ”
COVID-19 waa dhacdada kaliya ee dhaqaalaha ugu liidata taariikhda warshadaha hudheelada Mareykanka. In kasta oo kor u kacii ugu dambeeyay ee safarka xilliga firaaqada ee xagaaga uu yahay mid dhiirrigelin leh, ganacsiga iyo safarka kooxeed, isha ugu weyn ee dakhliga ee warshadaha, waxay qaadan doontaa waqti aad u dheer si ay u soo kabato. Safarka ganacsiga wuu hoos u dhacay lamana filayo inuu kusoo laabto heerarka 2019 illaa ugu yaraan 2023 ama 2024. Dhacdooyinka waaweyn, shirarka iyo shirarka ganacsiga sidoo kale horey ayaa loo joojiyay ama dib loo dhigay illaa ugu yaraan 2022.
In kasta oo ay ka mid yihiin kuwa ugu ba'an ee uu ku dhuftey aafada, hudheeladu waa qaybta kaliya ee soo dhaweynta iyo madadaalada ee aan wali helin gargaarka tooska ah ee la xidhiidha COVID